Alahady 09 Mey 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY FAHA 09 MEY 2021
ALAHADIM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA
“Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika...”
Romana 5 : 1-5
Mandia volana vaovao indray isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny Tompo. Izy no mbola manome ny fahasoavany ho antsika ka afaka miombom-po sy fiderana ary miombom-bavaka amin’izao fitaovana fifandraisan-davitra izao . Lohahevitra vaovao no hobanjinin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana mey ity dia ny hoe : “MAMPIORINA NY MINO NY FANAHY MASINA” . Miavaka ihany koa ity fotoana ity satria natao indrindra ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenan’ny Sampana Lehilahy Kristiana teto amin’ny Fitandremana. Ity ihany koa no alahady, ivon’ny fanateram-bokatra ho an’izany sampana izany.
Hijery ny oronantsary
RAKOTOVOLOLONA Lovanosy, Diakona no sady mpikambana ao amin’ny SLK, no nitarika ny fanompoam-pivavahana . Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.
Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny Soratra Masina araka izay hita ao amin’ny Salamo faha 108 and. 1-5 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra: “Andriamanitra ô, tafatoetra ny foko; Ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Mifohaza, ry valiha sy lokanga; hifoha maraina koa aho. Hidera Anao eny amin’ny firenena maro aho, Jehovah ô, Ary hankalaza Anao eny amin’ny jentilisa.
Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao; Ary mipaka eny amin’ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin’ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô; Ary aoka ho etỳ ambonin’ny tany rehetra ny voninahitrao. Amen”.
Ny hira FFPM 24 : 1-4-5 “ Ny lanitra ao ambony ao” no niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo tamin’ny fiandohan’ izao fanompoam-pivavahana izao.
Izao no vavaka natao ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra :
“Endrey ny fitiavanao anay ry Andriamanitra tsara indrindra ô. Misaotra Anao izahay noho izao andro anio izao izay nomena anay. Misaotra Anao izahay noho ny amin’ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra nomenao anay: ny rivotra iainana , ny sakafo mahavelona anay isan’andro, ny fitahiana ary koa ireo soa narotsakao ho anay. Heniky ny hasoavanao tokoa Tompo ô izahay ka avy, midera sy mankalaza ary manome voninahitra Anao satria mendrika ho Anao izany. Misaotra Anao ihany koa Tompo ô! Noho ny Telopolo taona nomenao anay sampana Lehilahy Kristiana, mitory ny Filazantsaranao sy ny hazavanao hamirapiratra amin’ireo lehilahy kristiana marobe eto amin’ny Fiangonana ka ho mpandresy mandrakariva manana Anao ho Tompo sy Mpanjakanay. Izay rehetra ataonay eto dia raiso ho voninahitry ny Anaranao irery ihany. Ankehitriny, indreto izahay tonga eto an-tranonao manao izao fanompoam-pivavahana izao. Aoka ny fonay hahita Anao amin’ny alalan’ny Teninao. Manatreha izao fotoana izao Ianao ary aoka ny Fanahinao Masina hiasa aminay vahoakanao ka hahatonga anay hihavao hatrany amin’ny fandraisana ny famelan-keloka atolotrao anay ary ny Teninao mba hahazoanay mijoro ho vavolombelonao hatrany ka ho sahy hitory ny Filazantsaranao amin’ny olona rehetra. Fanahy masina ô! Avaozy ny voaary manontolo. Amin’ny Anaran’i Jesoa. Amen!”.
Izao kosa no sitrapon’Andriamanitra nambara tamin’ny Fiangonana : “fa voasoratra hoe : Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo.
Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo.Fa raha tarihin’ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin’ny lalàna. Fa miharihary ny asan’ny nofo, dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra. Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy,fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany. Amen”.(Galatiana 5:16-23)
Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 241 and. 3 “Ry Jeso ô! Monena,
Eo anatrehan’ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy tanteraka isika, ka noho izany dia mila mifona isika sy miaiky ny fahotantsika : “Ry Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara indrindra ô! Misaotra Anao izahay fa mbola manana fotoana, afaka mandre sy mandinika ny sitraponao.Tamin’ity anio ity dia nanambara Ianao fa tokony handeha araka ny Fanahy izahay; ka ny vokatry ny Fanahy no tokony ho hita eo amin’ny fiainanay, indrindra eo amin’ny fifandraisanay samy izahay. Mifona Aminao anefa izahay fa tsy mendrika na dia ny hiantso ny Anaranao aza satria hitanao fa tsy araka izany ny fiainanay . Ry Andriamanitra Mpamindra fo ô, mitalaho eto anatrehanao izahay. Raiso re ny fifonanay rehetra . Henoy ny vavakay Tompo ô, ka mamelà anay. Diovy izahay mba ho afa-pahotana, ary sasao mba ho afa-keloka. Raiso ho zanakao izahay ankehitriny mba hiara-handova amin’i Jesoa Kristy ilay nitondra ny fahotanay sy nanasa anay tamin’ny ràny, fa amin’ny Anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen!”
Ny hira FFPM 175 : 2-3 “Fa diso làlana, ka ory izahay!” no nohiraina ho fifonana amin’ny Tompo.
Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny Tompo ka mamela ny fahadisoantsika sy manadio antsika ho afaka amain’ny tsy fahamarinana rehetra . Raiso am-pifaliana ny Teny famelan-keloka izay hambaran’ny Tompo aminao ankehiriny: “Fa hoy ny Tompo, Izaho tsy manameloka anao. Mandehana ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony . Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’ izay ao amin’i Kristy Jesoa. Koa ho anao izay nibebaka marina tokoa dia voavela ny helokao noho ny famindrampon’Andriamanitra. Amen”.
Taorian’ny fandraisana ny famelan-keloka dia nohiraina ny hira FFPM 424 and.1, 3, 4 “Tsaroako dia tsaroako” ary rehefa izany dia natao ny fanekem-pinoana laharahana voalohany.
Nandritra ny fotoana nanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia fanentanana no natao ka RAKOTOVOLOLONA Lovanosy ihany no nanatanteraka izany.
Nambara tamin’izany fa ho fanatanterahana ny vokatra ho an’ny Sampana Lehilahy Kristiana dia entanina isika mpianakavin’ny finoana handefa izany amin’ny laharana finday 0342520850. Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.
Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia mbola nataon’ny Fiangonana ny hira 243 and. 1. 2. 3 “Mivory eto izahay”.
RANDRIAMAHOLISON Jules no nanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny ary izy ihany no namaky ny Testamenta Taloha. RAKOTOMALALA Johary kosa no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Genesisy 41: 37-46. Ny Testamenta Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Marka 13: 9–11 ary ny epistily dia ny Romana 5:1-5.
Mialoha ny nirosoana tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 179 and. 1. 3 “ Ny Fanahy masina efa Tonga tokoa ”.
Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana izy dia nandray ny teny araka ny Romana 5 : 1-5, hitondrana ny hafatra androany.
Mbola nampahatsiahiviny moa fa ity dia alahadim-bokatry ny Sampana Lehilahy Kristiana ary natao ihany koa ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taonan’izany Sampana izany.
Mandray lohahevitra vaovao isika ankehitriny dia ny hoe: “MAMPIORINA NY MINO NY FANAHY MASINA”.
Ny bokin’ny Romana , ary indrindra eto amin’ity toko faha 5 ity dia mampianatra sy mandroso foto-kevitra mikasika ny famonjena amin’ny finoana ny Apostoly Paoly.
I Paoly dia nahatsapa fa tsy ny asan’ny lalàna izay tanterahina akory no hahazoana famonjena fa ny asan’ny finoana, dia tsy inona fa ny finoana ny famonjena izay tanteraka tao amin’i Jesoa Kristy. Lohahevitra iray lehibe no azontsika atolotra ao anatin’ity perikopa ity dia ny hoe:
“NY SOA ANANAN’NY MINO AO AMIN’I KRISTY”.
Roa ny hafatra hampitaina amin’izany:
*NY TOERANA MISY NY MINO EO ANATREHAN’ANDRIAMANITRA: (and1-2)
Misy tombontsoa telo faritan’ny Apostoly Paoly ho an’izay mino an’i Jesoa Kristy :
Efa nohamarinina ao amin’i Kristy ny mino,
Manana fihavanana amin’Andriamanitra ny mino,
Mifaly amin’ny fanantenana noho ny voninahitr’Andriamanitra ny mino.
Ny herin’ny Fanahy Masina izay miasa ao anatin’ny mino no ahafantarany fa manana ireo tombontsoa ireo izy. Entina nanazava izany ny tantaran’i Josefa izay nanana ny Fanahin’Andriamanitra ka afaka nandika ny nofin’i Farao. Ny tombontsoa azon’i Josefa noho izany dia lasa nametrahan’i Farao ny fitokisana rehetra izy teo amin’ny fahefana sy ny fanapahana ny tany sy ny firenena. Tsy izy ihany no nahazo tombontsoa fa ny fianakaviany ihany koa.
Ry havana, omen’Andriamanitra tombontsoa tokoa ny olona izay mino Azy na lahy na vavy .
Fa miavaka ihany anefa ny lehilahy indrindra raha aseho ity tantaran’i Josefa ity.
Ny mpanakanto aza dia mba naneho izay mampiavaka ny lehilahy izay ihany koa fa hoy indrindra ny hiran’izy ireny manao hoe :
“Matanjaka sy mahery ny lehilahy; mafy, mahari-pery ny lehilahy; maharitra ny mafy ny lehilahy; fa zatra ny miafy ny lehilahy; raha sendra ka voadona any ho any, dia sanatria aminay izay hitomanimany; na hikolay hiolomay raha ny lehilahy; raha misy manahirana, tsy maintsy miramirana; tsy mba malemy saina ary tsy mba mitaraina ny lehilahy”.
Nomena toerana sy tombom-pahasoavana manokana ny lehilahy ary izany no efa noharian’Andriamanitra azy, hitafy ilay endrik’Andriamanitra ka hifehy ny voaary manodidina azy ety ambany masoandro. Nomena namana izay tandrify sy mendrika ho azy ihany koa anefa ny lehilahy.
Anio dia hanatanteraka vokatra ny Sampana Lehilahy Kristiana. Manana ny zara toerany ho voalohany na eo anivon’ny fiarahamonina sy eo anivon’ny Fiangonana ny lehilahy.
*FALY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA AO AMIN’I KRISTY NY MINO
Mety misy zavatra samihafa mitranga eo amin’ny fiainan’ny olona fa ny tombony ho an’ny mino dia ny fananany ny herin’ny Fanahy Masina izay mitaona azy hiverina am-po, an-tsaina am-panahy ao amin’ny Tompo mandrakariva. Koa na dia misedra zavatra aza isika eo amin’ny fiainana dia ho eo am-bavantsika tokoa anie ny hira Ffpm 488 :
Na inona na inona hitranga !
Na ny lanitra ho manga !
Na ho maloka mangina !
Dia ho feno fifaliana !
Azontsika hiraina tokoa izany hira izany na amin’ny fotoan-tsarotra na amin’ny fotoana mahafaly fa indrindra amin’izao fotoana izay hikatonan’ny trano fiangonana izao.
I Paoly dia manambara teny mifandraika indrindra amin’izany eto dia ny hananana faharetana amin’ny fahoriana amin’ny fanarahana an’i Jesoa. Izany dia mitondra antsika mba hanana toe-panahy araka an’Andriamanitra, maneho ny maha olom-baovao ny mino.
Izany ihany koa dia mampahatanjaka ny fanantenana ao amin’ny mino ka mitondra azy amim-pahasahiana hisedra ny sarotra rehetra.
Ny herin’Andrimanitra izay miasa ao anatintsika no mahatonga antsika maharitra sy miaritra izany ary mampitsidika ny fifaliana ao anaty.
Ampahafantarin’ny Tompo ao amin’ny Marka 13 : 9-11 ny toe-tsaina mifaly mandrakariva amin’ny zavatra rehetra.
Ho anao Lehilahy kristiana io , dia zava-dehibe ny fahafahanao mijoro sy miditra ao anatin’ny Sampana Lehilahy Kristiana, satria fanehoana fa noresenao izay zavatra any ivelany, fa nidiranao sy nanapahanao hevitra kosa ny zavatra izay mahasoa ny fiainam-panahinao ao amin’ny Fiangonana hahatonganao ho tena Kristiana mpanara-dia an’i Kristy sy mitafy ny fandresen’i Kristy.
Tsarovy ary fa ny herin’ny Fanahin’Andriamanitra no hananantsika fahasahiana sy fanapahan-kevitra tsara .
Ny hafatra dia ny hanekentsika ny herin’ny Fanahy Masina miasa ao anatintsika, ao anatin’ny Fiangonana, ny ankohonana sy ny tenantsika tsirairay. Mba ho ao amin’i Kristy mandrakariva ka ny fandresen’i Kristy no ho fandresentsika ny zavatra rehetra ary hijoroantsika ho mpanompo mahatoky, eny, hatramin’ny fahafatesana, fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena, mba ho tombontsoa ho antsika tokoa ny faharetantsika manatanteraka ny asan’Andriamanitra, entin’ny herin’ny Fanahy Masina manatanteraka izany amin’ny ankehitriny sy amin’ny hoavy.
Ho an’Andriamanitra irey ny voninahitra.
Nanatontosa ny hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ny hiran-dRAJAOFETRA John manao hoe: “Efa nandre ny antsonao” taorian’ny toriteny.
Taorian’izany no nanaovana ny vavaka fangatahana, nitondrana am-bavaka:
*ny Mpitondra Fiangonana,
*ny Mpiandraikitra Foibe rehetra,
*ny fanomanana ny Synoda Lehibe,
*ny rafitra samihafa eo anivon’ny Fiangonana,
*ny Sampana Lehilahy Kristiana,
*ny kristiana amin’ny Fitandremana sy ny any am-pielezana.
Nivavaka mba hanomezan’Andriamanitra fahasalamana ny olona rehetra. Nivavaka ho an’izay manana hataka manokana.
Izany vavaka izany dia nofaranana amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
Natao ny hira FFPM 307 :1,3 ary novakiana ny Tondrozotra 2021 ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira FFPM 283 and 5 izao fanompoam-pivavahana izao.
Nandray ny Soratra : RABAKO Tovohery
Nitendry Orga : IRIMANANA Eninkaja
Nikirakira ny oronan-tsary sy ny feo : RANDRIAMAHEFA Tianarivony